Waa gobolkaaga cidda tallaalka ka mas'uulka ahi. Gobolka bogga xagiisa sare ka dooro si aad ugu hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa khuseeya meesha aad joogto
Qabso ballan tallaalka ah
Folkhälsomyndigheten waxa ay soo jeedisay sida loo kala horreysiinaayo dadka kala duwan ee loo soo bandhigaayo tallaalka.
Dhamaan dadka 16 sano jirka ka weyn ama sanadkan 16 jir buuxinaaya ayaa tallaalka loo soo bandhigi doonaa. Uma baahnid inaad muwaadin Iswiidhish ah ahaatid si laguugu talaalo.
Waxa tallaalka cirbad lagaaga siinayaa cududa. Waxaad u baahan kartaa inaad laba cirbadood qaadato. Waxa cirbadaha lagu kala siin doonaa marar kala duwan.
Waxaad marka cirbada lagu siiyo aad meesha sii joogi doontaa 15 daqiiqo. Taasi waxa weeye si caafimaadkaaga loogu hubiyo.
Laba todobaad ka dib markaad cirbada ugu danbeysa qaadato ayaad difaac aad u wanaagsan oo badan oo covid-19 ah leedahay. Waxaad difaac wanaagsan leedahay saddex todobaad ka dib cirbada koowaad, xitaa haddii aad qaadan doonto laba cirbadood.
Miyaan is talaali karaa haddii aan jiranahay?
Waa in aanad is tallaalin haddii aad qandho ama calaamado covid-19 ah leedahay.
Waxaad yeelan kartaa cududda oo ku xanuunta, madax xanuun iyadoo aad daalan tahay maalinta ugu horreysa ee talaalka ka dib. Waxaad sidoo kale noqon kartaa inaad barafoowdo, aad qandho yeelato ama ay laabatooyinka iyo murquhu ku xanuunaan. Waxa loo yaqaanaa saameynta xun.
Saameynta xun ee talaalka
Dawladda ayaa soo saartey talobixino ku saabsan noocyada tallaalka ee ay dadka kala duwani qaadan doonaan. Dhamaan tallaalada si wanaagsan ayaa daraasad loogu sameeyey.
Wax dheeraad ah ka akhri bogga internetka ee Folkhälsomyndigheten.
Shaqaalaha daryeelka caafimaadku waa inay soo sheegaan saameynta xun ee talaalka
Dumarka uurka leh ayaa aad ugu jiran kara covid-19. Si aad naftaada iyo ta ilmahaba ugu illaaliso ayaa tallaalka laguugu soo jeedinayaa. Waxaad is tallaali kartaa todobaadka 12-aad ee uurka ka dib.
Carruurta iyo talaalka
Dadka 16 sano jirka ah ama sanadkan 16 jir buuxinaaya ayaa tallaalka loo soo bandhigi doonaa. Carruurta da'doodu tahay 12 jir ama wixii ka weyn ee xanuuno khatar ah qaba ayaa sidoo kale loo soo jeedin karaa tallaalka. Taasi waxa tusaale ahaan ka mid ah cudurrada sambabada ee halista ah qaarkood.
Kala hadal dhakhtar haddii aad is weydiineyso wax shaqeynaaya.
Talaalku ma amaan baa?
Tallaalka covid-19 waxa loo sugay si la mid ah sida taxaddirka badan leh ee tallaalada kale. Dad badan ayaa tallaalka qaatay iyadoo cilmi baadhayaal ay daraasad saameyntiisa ku sameeyeen. Waxa sii socota in tallaalka daraasad lagu sameeyo.
Waxa aad bogga Så fungerar vaccin ka akhrisan kartaa oo aad ka daawan kartaa filimo talaalka ku saabsan. Qoraalka iyo filimadu waa af Iswiidhish.
Waxa ay qaadanaysaa laba todobaad cirbada ugu danbeysa ka dib ka hor intaad difaac wanaagsan helayso/yeelaneyso. Waxa jirta khatar yar oo aad jirada ku qaadeyso xitaa haddii aad is talaasho.
Waxa sidoo kale jiri karta khatar yar oo aad adigu fayruska lagu fidinaayo xitaa haddii aanad jiranayn, tusaale ahaan haddii aad gacmaha ku qaadatay.
Lama oga ilaa inta uu tallaalku ku difaacaayo.